DAAWO: Puntland oo sheegtay in ay soo qaban doonto dadkii ka dambeeyey Dilkii Taliyihii ciidanka Ilaalada Madaxtooyada.
August 9, 2020 NEWS 0
GAALKACYO(P-TIMES) – Gudoomiyaha gobalka Mudug Cabdilladiif Muuse Nuur (Sanyare) ayaa ka hadlay howlgal ay saaka ciidamada Puntland ka fuliyeen magaalada Galkacyo, kaas oo lagu baneynayay xerada Kabida oo ahayd goob ay horey u lahayd dawladdii dhexe ee Soomaaliya, dhawana loo gaday dhismaha dekeda magaalada Garacad, balse ay diiden qaar kamid ah maleeshiyaad kusugnaa.
Sanyare ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qeyb ka ah xasilinta magaalada Galkacyo, wuxuuna sheegay in cid kasta oo kasoo horjeeda ammaanka iyo kala dambeynta ay talaabo ka qaadi doonaan laamaha Ammaanka.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay dawladu dadaal iyo waqti galisay sidii wax looga qaban laha dadka diidan horumarka gobalka oo ay ku jiraan kuwa amaan-daradda ka shaqeynaya.
Mr, Sanyare ayaa cadeeyey in cid kasta oo ka hortimada ciidamada Ammaanka lala dagalami doono, isagoo sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono kuwii saaka weeraray ciidamada oo maxkamad la horkeeni doono.
Madaxweyne Deni ayaa dhawan amray in qof kasta oo diidan nabadda laga horwareejiyo, isla markaasna ay tahay in ciidamadu ay shaqeeyaan oo ay nabad iyo nidaam kusoo celiyaan magaalada Gaalkacyo, oo ay shacabku mudo dheer dalbanayeen nabad in lahelo.